शरीरमा देखिएका यी १० लक्षण ठूला रोगको संकेत, ढिला हुनुअघि पहिचान गर्नुहोस् - Aayo Raibar
हाम्रो शरीरले धेरैजसो विभिन्न प्रकारको रोगबारे संकेत दिन्छ तर मानिसहरु यसलाई नजरअन्दाज गरिदिन्छन् । यस्ता चेतावनीयुक्त संकेत यदि तपाईंले समय हुँदा नै थाहा पाउनुभयो भने ठूला रोग लाग्नबाट शरीरलाई बचाउन सक्नुहुन्छ । आउनुहोस्, यस्ता केही संकेतबारे जानकारी लिऔं जसले शरीर स्वस्थ छैन भनेर थाहा पाउन सकिन्छ ।
शौचालय जाँदा कहिले आफ्नो पिसाबको रङलाई नियालेर हेर्नुभएको छ ? पिसाबको रङले पनि स्वास्थ्यबारे धेरै कुरा बताउन सक्छ । डाक्टरका अनुसार पिसाबको रङ सामान्य रुपमा हल्का पहेँलो हुनुपर्छ । साथै पिसाबबाट कुनै तेज गन्ध पनि आउनु हुँदैन । तपाईंको पिसाब त्यस्तै छ भने चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कुरा छैन ।
तपाईंले कद बढ्नेबारे त सुन्नुभएको होला तर कहिले मानिसको उचाई नै घटेको बारे सुन्नुभएको छ ? धेरै मानिसहरु यसबारे सोच्दैनन् । तर वास्तवमा हाम्रो उचाई घट्न सक्छ । वास्तवमा यो हड्डीसँग सम्बन्धित एउटा समस्या हो । हामी यहाँ निकै कम व्यक्तिबारे कुरा गर्दै छौं जसको उचाई प्रोटिन वा क्याल्सीयमजस्ता महत्वपूर्ण पोषक तत्व नपाएका कारण घट्न सक्छ ।
गिजा सुन्निएका कारण थुप्रै पटक मुखबाट दुर्गन्ध आउन थाल्छ । तर के तपाईंलाई तपाईंको मुखबाट आउने दुर्गन्ध तपाईंको प्रतिरोधी क्षमतासँग पनि सम्बन्धित छ भन्ने कुरा थाहा छ ? मुखबाट दुर्गन्ध आउँदैन भने तपाईंको प्रतिरोधी क्षमता एकदम दुरुस्त छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।
चलचित्र ‘कृष्ण लीला’को ‘डियर बन्न मन छ’ सार्वजनिक